Miasa mafy ny Frantsay amin’ny alalan’ny COI, OIF ampian’ny Maurice hanaovan’i Andry Rajoelina fifidianana ! – MyDago.com aime Madagascar
Miasa mafy ny Frantsay amin’ny alalan’ny COI, OIF ampian’ny Maurice hanaovan’i Andry Rajoelina fifidianana !
magro 07 avril 11
Toy ny mahazatra dia nifanome fotoana teto amin’ny kianjan’ny Finoana ny mpandala ny ara-dalàna tamin’ity androany ity.Samy nanakianana ny fitsabahan’ny Maorisy sy ny Lafrantsa amin’ny raharaha eto Madagasikara ny mpandaha-teny .
Anisan’y nandray anjara fitenenana tamin’izany i Misa solon-tenan’ny tanora ka nambarany àry fa tsy manaiky ny fidiran’i Maorisy amin’ny fitsabahana amin’ny raharahan-tokantranon’i Madagasikara koa noho izany hoy ihany izy dia hanao sit-in manoloana ny Masoivohon’i Maorisy rahampitso amin’ny 10 ora maraina.
Olon-tsotra iray indray kosa no nikabary sy nilaza ny heviny fa : « Anjaran’ny SADC no manao ny fanelanelanana fa tsy mila an’i Maorisy hitsabatsabaka amin’ny raharahan’i Madagasikara koa samia mijoro isika hanohitra izny ary tsy maintsy hasehontsika fa tsy mankasitraka izany isika »
Anisan’ny nisongadina tamin’ity androany ity ny fandraisan’ny tanora maro anjara fitenenana ka isan’izany ity Jeune TIM iray izay nilaza fa omenay an-dRavalomanana ny tanjakay hoy izy koa manainga antsika tanora hijoro amin’ny famerenana haingana ny Filoha Ravalomanana .
Mbola tanora iray ihany koa i Ramy izay nitatitra ny fehin-kevitra nataon’ny PNUD momba an’i Madagasikara : nitombo 8% ny taham-pahantrana , nidy ny Zone franche , betsaka ny olona very asa.
Miasa ny Frantsay amin’ny alalan’ny COI,OIF mba hanaovan’i Andry fifidianana : tsy hanaiky izany izahay fa miala izy no fantatray hoy ity tanoran’i TMR.
Toy ny fiasan’ny MAFIA ny fitehirizana halatra ataon’ny FAT miaraka amin’ny Maorisiana hoy ny Depiotean’i Manakara teo aloha iMektob
Nanao tatitra ny zava-niseho tany aminy kosa i Ignace solon-tenan’i Moramanga:
tonga nitokana ny tsenan’i Moramanga ny lehiben’ny Faritra Alaotra Mangoro kanefa tsy nahafapo ny vahoaka ny zavatra nomeny satria olona mandeha an-tongotra 18km nefa vary kely 5kg no mba nomena azy.
Koa dia mifanome fotoana rahampitso indray izany ny ankolafy telo !
Jereo eto koa ny sary Photos Magro 07/04/2011 (1/3) miisa10.
Jereo eto koa ny sary Photos Magro 07/04/2011 (2/3) miisa10.
Jereo eto koa ny sary Photos Magro 07/04/2011 (3/3) miisa 05.
Conférence presse Tanora Marc Ravalomanana 31/03/2011
9 réflexions sur « Miasa mafy ny Frantsay amin’ny alalan’ny COI, OIF ampian’ny Maurice hanaovan’i Andry Rajoelina fifidianana ! »
8 avril 2011 à 5 h 17 min
Ny tena anton’ny hidiran’ny Maorisianina eto koa anie dia ny tsy hiverenan’i Filoha RAVALOMANANA amin’ny fitondrana e! Lefy mantsy amin’izay ilay fitenenana hoe « MAURICE, LE DRAGON DE L’OCEAN INDIEN », satria raha vao miverina eo i Ravalo dia « fin » io »pub » io!
« Intérêt » fotsiny no tena ataon’ireo OIF, COI, sy ny Maorisianina miaraka amin’ny FATn’alika ireo, ka tandremo!
8 avril 2011 à 6 h 15 min
Izany zany no nandehan’i Simao tany Maorisy tanelanelan’ilay diany taty teo iny?
Mbola manankery ve sa tsia ilay fampiharan-dry zareo ny sanction ho an’ireo 109 olona voaheloky ny SADC?
Anio amin’ny 10ora izany eny anoloan’ny Ambassade Mauricienne: ampiriato any, firenena miseho azy ho demokratika. Tsy ampafirin’ny onu tafiditry ny FOZA, nefa nifafy SANKALITE i Domelina…
VIVE NOS JEUNES TMR, le pays a plus que jamais besoin de votre témérité.
Aucun jeune n’est impassible, ne peut pas rester passif face à l’injustice dans laquelle on nous force de vivre
8 avril 2011 à 10 h 09 min
Tolona eny amin’ny magro tompoko tsy tolona eraky ny madagasikara.Ny tolona miaraka amin’ny sadc indray kosa indro fa ho tsenain’ny coi sy maurice.Kely sisa dia tampina tanteraka ny daomy ry mpitolona eto amin’ny internet.Kely sisa.
Efa azon’i maurice koa i mozambique sy i Chissano.Donc roa sahady ny fireneba anatin’ny sadc no anohana an’i Andry.Kely sisa hoa!
8 avril 2011 à 11 h 11 min
..dia hita mihitsy fa ny tombotsoan’i dadanareo ra8 no mibahana ao antsainareo
fa tsy ny tombotsoan’ny vahoaka. Hita izao ny tsy nety nataon-dravalo dia mbola
ny hiverenany hitondra ihany no katsahinareo… MAMPALAHELO!!!!
TADIDIO fa t@ DECEMBRE 2008 DIA nampiato ny fanampiana an’i Madagasikara ny mpamatsy vola satria tsy nazava ny fividianana Boeing ho an’ivalomanana !!! AZA ODIANA TSY FANTATRA IZANY , raha tsy mino dia IVERENO VAKIANA ny gazety nivoaka t@izay fotoana izay..
mampihomehy hoe : Mitsabaka @ raharahan’ny Malagasy , ny Maorisiana, ny COI..sns…koa maninona tsy
TOHERINA ihany koa ny fidiran’ny SADC izay Mpitondra JADONA avokoa izy mianakavy fa saingy HALABATO
no ifikirana eo @ fitondrana, ireo filoha ireo no ianteheran-dravalo satria DICTATEUR tahaka azy ihany. Ry MUGABE, ry KABILA sns…. dia ny olona MANAKIMPY maso sy tsy mahafantatra tantara sy ny
zavamisy any amin’ireo firenena ireo no mila vonjy sy fanampiana politika avy any.Sa tadiavinareo HIFANDOVA FANJAKANA tahaka ny KABILA zanany sy ny Rainy koa ravalo?? TADIAVINAREO HO PRESIDENT à vie ve i valomanana kely loha mpivarodrono BEZINGA hoy ny MFM.
BEZINGA izay no fiantsoany MFM azy, ankehitriny moa nohon’ny fahantrana dia misolelaka miaraka aminareo i Manandafy satria nahazo vola.Mikasika ny MFM ihany koa dia ivereno vakiana ny fanambarana nataon’i Veve ( Olivier Rakotovazaha) SG ny MFM t@ mpanao gazety ny 2008: Niteny izy fa FENO IZAO NY FEPETRA REHATRA TOKONY HANONGANANA an-dravalo. Nohon’ny vola azo t@ ndravalo nefa dia nanjary nanohana azy indray. i Lalatiana ravololomanana dia NITSOAKA teto Madagasikara ary sesin-tany nandritra ny fitondran-dr8 ,ka tsy afaka niditra teto Madagasikara raha tsy niongana i valo. i Zafy Albert dia TSY NANAIKY NANDRITRA NY FITO TAONA fa ravalo no Filoha : UN ROUBLARD au POUVOIR no niantsoany an’i valomanana. Ratsiraka tsy faka nody teto Madagasikara. ary ny fifanarahana DAKAR I sy II nifiran-dravalo. farany AZA LALAOVINA NY VAHOAKA MALAGASY ry tsy matahaotody sy DONDRONA ireto. Mba SOKAFY NY SAINA SY NY MASO ry ziry sy ry hoaiza fa aza dia kely loha tahakan’io.. TSY MILA SADC DICTATEUR hanampaka sy handidy ny HO AVIN’NY MALAGASY
8 avril 2011 à 12 h 48 min
Fa heverinao ve rakoto fa hangalARINA ny fitondrana de tsy maintsy tokony ho heken i vahoaka malagasy fotsiny a! Tsy ny tombotsoa ny ravalomanana mihintsy akory no hitolomany olona fa ny tombotso-pirenena!!!Matoa ny olona mbola miady momba ndravalo dia izy no mety aminy vahoaka aloha hatreto….Ravalo tsy voatery ho tiavina, zo anao izany ary na izao azy hijanona ampy ho azy ny volany….fa matoa ny olona misaina miady dia mba tsy hanjakiny baroa ao aminy firenena sy ny hajankany democratie….tsotra koa anie no valiny izany e aleo samy milatsaka hofidina dia hita eo iza o mety aminy malagasy….matoa miady mafy ny tsy hiverenena dia tsy sur hoe mamibahoaka….raha hiresaka ny tsy mety nataony indray,mba lazao koa hoe ireo ataony mpitondra amin izao fotona…ary ra tsy mila ny sadec de tsy mila ny frantsay koa….
Rehefa mamaly an’ireo foza ireo ry mimi, dia tsy mila atao lava ny resaka â ! Tsy ho azon’izy ireo velively manko !
Raha tahaky ny kanety ny ahabean’ny ati-dohan’i HoAiza sy Ziry, ny an’ireto foza ireto mila STEM vao hita !!
Nanongam-panjakàna, dia izao ny gasy rehetra no mifafa an’ny kihoany ! Voriana daholo izao bodo sy adala rehetra izao, tsy mahazo rariny !!
Nalaina ho solombavam-bahoaka ny mpangalatra, nantsoina ireo azy miseho ho ray aman-dreny mijoro, voriana koa ireto milaza ny tenany ho taranak’andriana sy mpanjaka. Ka mba rahoviana no voriana ny mitovy aminay TARANAK’ANDEVO ???? SA EFA TSY HILAINA INTSONY SATRIA EFA VITA NY NILAVAN’AZY ????
8 avril 2011 à 13 h 36 min
Rakoto = Foza !!!
dia maninona raha nilaza an’izany i Manandafy, Zafy, Ratsiraka, Rakotovazaha, sns… Niova hevitra anie izy izany e!!
Ny anareo ary izay olona tao @ TIM rehetra ity vidiana daholo kanefa mbola tsy mety misy résultat fa izao matahotra mafy ka navoaka daholo ity fandrarana rehetra ity hoe tsy azo soloina ny izao sy izao. Iza anefa miteny anareo hoe ampidirio ao @ io gouvernement io ireo TIM sy AREMA ireo!!
Raha resaka SADC, tsy ianareo ihany ve hatrizay no nilaza fa tsisy ilana azy izy ireo ka toa mitalaho @ indray nareo hoe omeo Reconnaissance internationale. Aiza re izany ry Rakoto e!!
30 mars 2012 à 5 h 06 min
hot sexy girls lbsiean ebony pussy lbsiean dildo black dahlia lbsiean lbsiean clubs seattle indiana debra hartman lbsiean free teen lbsieans masturbate jody foster lbsiean
Précédent Article précédent : Rehefa tsy nahomby ny fanelanelanan’ny Raiamandreny mijoro, miditra indray ny Taranak’andriana, Ampanjaka, Sojabe, Hazomanga, Tangalamena ary Loholona !
Suivant Article suivant : Lettre ouverte à Mme la Ministre de la Justice de la HAT